Nezvedu - GTMSMART Machinery Co., Ltd.
GTMSMART Machinery Co., Ltd. ibhizimusi repamusoro-soro rinobatanidza R&D, kugadzira, kutengesa uye sevhisi. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira Thermoforming michina, Plastic Thermoforming Machine uye Cup Thermoforming Machine,Industrial vacuum kugadzira muchina, Paper cup kugadzira muchina, Paper bowl kugadzira muchina, Paper plate kugadzira muchina etc.
Isu tinoshandisa zvizere iyo ISO9001 manejimendi system uye nekunyatso tarisa iyo yese maitiro ekugadzira. Vashandi vose vanofanira kudzidziswa unyanzvi vasati vashanda. Yese yekugadzira uye kugadzira maitiro ane yakasimba sainzi tekinoroji zviyero. Chikwata chakanakisa chekugadzira uye yakakwana yemhando sisitimu inovimbisa kurongeka kwekugadzirisa uye kusangana, pamwe nekugadzikana uye kuvimbika kwekugadzira.
GTM ine chikwata chehunyanzvi chehunyanzvi chakazvipira kutsvagisa, kusimudzira, uye kugadzira kwepamusoro-soro, kuchengetedza simba uye zvakanyanya otomatiki epurasitiki sheet extrusion uye molding zvine chekuita nemichina. Inogona kupa vatengi masevhisi akazara uye anofunga: anosanganisira muchina uye mold dhizaini nekugadzira, kuisa uye kutumira, kudzidziswa kwevashandi, nezvimwewo, uye vakapasa CE kuchengetedza chitupa.
Isu takavakirwa pamweya wekutsvaga chokwadi kubva kune chokwadi uye maitiro ekuedza kuita zvakanaka, nyatso teerera kune yekusimudzira maitiro emapurasitiki ekurongedza muchina, sanganisa yepamberi yekugadzira tekinoroji yepurasitiki yekurongedza muchina kumba nekune dzimwe nyika uye zvinodiwa nevatengi, uye edza kupa vatengi vedu emhando yepamusoro epurasitiki yekurongedza michina uye zvigadzirwa zvemidziyo; Iyo yakanakisa mhinduro uye yakazara pre-kutengesa, kutengesa, mushure mekutengesa-sevhisi uye rutsigiro.
Vatengi vedu (Zvigadzirwa munzvimbo yevatengi)